यूएईबाट रवीन्द्र मिश्रलाई प्रश्न: नयाँ पार्टी किन चाहियो ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
यूएईबाट रवीन्द्र मिश्रलाई प्रश्न: नयाँ पार्टी किन चाहियो ?
रवीन्द्रजी, नमस्कार !
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका भित्तामा देशमा नयाँ पार्टी खुलेको विषय निकै चर्चामा रह्यो । खासगरी लाखौंको जागिर छाडेर देशलाई नेतृत्व दिन आएका व्यक्ति र अरु राम्रो नाम चलेका मानिसहरु मिलेको पार्टी खुल्दा धेरैको आशा चुलिएको छ ।
राजनीतिमा राम्रा मान्छेहरुको आगमनले अब देशमा केही हुन्छ भनेर देश-विदेशमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
यहाँ नेपालीहरु १२ घण्टा तातो घाममा काम गरेर लखतरान अवस्थामा कोठामा छिर्नासाथै राजनीतिक दल र नाम चलेका केही व्यक्तिहरुबारे वादविवाद सुरु भइहाल्छ । कोही भन्छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ! कोही भन्छन्, रवीन्द्र मिश्र त परोपकारी काम गरिरहेको मान्छे भएकाले जनताको पीर-मर्का बुझ्लान् ।
कोही सिके राउतले देश टुक्र्याउन आट्यो भनेर चिन्ता मान्छन् । कोही बाहुनले देश बेचेर सके भनेर सत्तोसराप गर्छन् । कोही अब देशमा राजाको शासन फर्किन्छ भनेर कराउँदै छन् । कोही चाहिँ कुनाबाट फुसफुसाउँदै छन्, अब सैनिक शासन सुरु हुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको मिटिङ हुन थालिसक्यो !
यस्तो चर्चा, बहस र धारणा राख्ने काम सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो कोठे जमघटमा मात्र सीमित छैन । यहाँ च्याउसरि खुलेका सामाजिक संघसंस्थाहरुको हरेक कार्यक्रममा राजनीतिकै विषयमा कुरा सुरु भइहाल्छ ।
म यूएई आएको आठ वर्ष भयो । यो बीचमा त्यस्तो कुनै दिन छैन, नेपालको राजनीतिको बारेमा कसैले गफ नगरेको होस् । तर, जिन्दगीमा कसरी अगाडि बढ्ने, स्वदेश फर्किएपछि यहाँ सिकेका सीपहरु कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा कसैको पनि ध्यान छैन । राजनीतिले परदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा पनि नराम्रो बीउ रोपेको छ । यहाँ खुलेका संघ-संस्था पनि पार्टीको राजनीतिबाट प्रभावित छन् ।
यी त भए मैले विगत आठ वर्षमा नेपाली समुदायमा देखेको राजनीतिक प्रभावको कुरा । अब म तपाईंतर्फ फर्किन चाहन्छु ।
नयाँ खोलिएको साझा पार्टीमा प्रवेश गर्न तपाईंको फेसबुकमा खुला आह्वान गरिएको देखेको थिएा । तपाईंले इकाईहरु गठन गरेर फोटोसहित सम्पूर्ण विवरण दिन इमेल र सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउनु भन्नुभएको रहेछ । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, मैले काम गर्ने देशमा यस्तो पार्टीगत संघ-संस्था खोलेको यहाँको प्रशासनले थाहा पायो भने जेलमा थुनिदिन्छ । किनकि त्यस्ता गतिविधि यहाँको कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छ ।
राजनीतिक संगठनमा लागेमा १२ घण्टा दुःख गरेर परिवारको लागि दुई छाक जुटाउन आएकाहरुको सपना त्यत्तिकै तुहिन सक्छ । त्यसैले खुला पार्टीका इकाई खोल्न यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आग्रह नगरिदिनुहोला । किनकि देशमा फोहोरी राजनीतिले गरिखाने बाटो बन्द भएपछि विदेशमा आएकाहरुलाई तपाईंहरुले राजनीतिको बीउ रोपिदिनुभयो भने उनीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुग्नेछन् ।
तपाईंलाई मेरा केही प्रश्नहरु छन् । नेपालमा च्याउसरि पार्टीहरू छन् । तपाईंले साँच्ची नै नेपाल र नेपालीहरुको हित गर्न खोज्नुभएको अहिले भएका पार्टीमा किन प्रवेश गर्नुभएन ? तपाईंसँग धेरै राम्रा विद्वान् व्यक्तिहरु रहेछन्, उनीहरुलाई लिएर अहिले भएकै पार्टीमा गएर पार्टी सुधार्ने पहल किन गर्नुभएन ? त्यस कारण तपाईंहरुको कदमलाई पनि म ठीक भन्न सक्दिनँ ।
ल मानौं, तपाईंका अनुसार अहिले देशमा रहेका पार्टीहरु सबैमा खोट छ रे । तपाईंले खोल्नुभएको पार्टीमा अब आउने मान्छेहरु सबै राम्रा नै हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? किनकि पार्टीमा आउन खुला आह्वान गर्दा राम्रासँगै नराम्रा मान्छे पनि आउने पक्का छ ।
अबको समयमा तपाईंहरु जस्ता पढेलेखेका मानिसहरुले नै देश बिगारेको भन्न पछि पर्दिनँ । किन भन्नुहोला, बाबुराम भट्टराईजीले पार्टी खोल्नुभयो, उहाँको आफ्नै भिजन । विवेकशील नेपालीको आफ्नै भिजन । यस्तै, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दल । देशमा भए जति पार्टीको आ-आफ्नै भिजन ? यी थरीथरी भिजनहरु केलाउँदा राष्ट्रिय मुद्दामा मिलनविन्दु देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा च्याउसरि पार्टीमा थप संख्या बढाउन लाग्ने कि घटाउन ?
तपाईंले गठन गरेको साझा पार्टीको प्रचारप्रसार र विस्तार गर्न पनि अझै एक-दुई वर्ष लागिहाल्छ । फेरि अरु कसैले अर्को पार्टी खोल्ला । यस्तो क्रम कहिले रोकिन्छ ? विविध पार्टीमा नेपाली जनताको भोट यत्रतत्र फैलिँदा देशमा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन र कसैको पनि स्थिर सरकार हुँदैन । जसको कारणले देश झन्-झन् आन्दोलन, अस्थिरतामा फस्दै जान्छ ।
विदेशी शक्तिहरुले हाम्रो देशमा खेलिरहेको कुरामा त तपाईं पनि अनविज्ञ हुनुहुन्न होला । विदेशी चलखेलले राजनीतिक दलहरु कठपुतली बन्दा देशमा अमनचैन आउने सम्भावना झन् टाढिँदै गएको छ । यस्तो फोहोरी राजनीतिबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्ति पाउने ?
म आठ वर्षदेखि यसरी यूएईमा आएर काम गर्नु रहर नभई बाध्यता हो हामी नेपाल फर्केर ढुक्कले कुनै व्यापार-व्यवसाय गर्ने वातावरण कहिले हुन्छ ? यसरी समयसँगै नयाँ पार्टीहरु खुल्नुलाई नै हामीले उपलब्धि मान्ने हो भने अर्कै कुरा होला ।
अन्त्यमा, पार्टी त खोलिहाल्नुभयो, तपाईंको पार्टी भने अरु जस्तो जनतालाई उपेक्षा गरी मुठीभरको स्वार्थ पूर्ति गर्ने खालको नहोस् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई इकाई खोल्न तपाईंले गर्नुभएको आह्वानलाई फिर्ता लिई उनीहरुलाई काम गरेर खान दिनुहोस् । कुनै दिन देशमा शान्ति र स्थायित्व आए उनीहरुले यहाँ सिकेका सीप नेपालमा प्रयोग गरेर देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थिए ।
सुरुंगा, झापा । हाल यूएई ।-प्रकाश सिग्देल
3/14/2017 03:40:00 PM